स्वास्थ्य Archives - Manaslu Post
सधैँ जवान : यी कलाकारको फिटनेस राज
काठमाडौं- गत जेठ २५ गते अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो फेसबुक वालमा केही फोटो सेयर गर्दै लेखे, ‘भोलि २५ पुग्ने भइयो, पिर पर्‍यो।’ जेठ २६ गते उनको जन्मदिन परेको थियो। यथार्थमा त उनको उमेरले ५५ टेक्दै थियो। तर सदाझैं उनी ‘भर्खर २५ पुगियो’ भन्दै आफूलाई जवान दाबी गरिरहेका थिए। खासमा यो दाबी उनको मात्रै होइन, आम दर्शकको दृष्टिकोण पनि हो। शारीरिक रुपमा देखिएको तन्दुरुस्ती र कामप्रति जोश र जाँगर...
दसैं र तिहारमा सुगर र प्रेसरका बिरामीका लागि टिप्स- के गर्ने, के नगर्ने ?
हिन्दू धर्मावलम्वीहरुको सबैभन्दा ठूलो र महान चाड दसैं र तिहार हो भने नेपालको पूर्वी तराईमा मनाइने पर्व हो छठ । खेतबारीमा बाली लगाई गोडमेल समेत सकेर मौसमको बदलावसँगै आउने दसैं–तिहार र छठ पर्व धेरै हिन्दू धर्मालवलम्वीहरुले धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् । दसैं, तिहार र छठ पर्व मनाउँदै गर्दा अधिकांश मानिसले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल भने गरेको पाइँदैन। फलस्वरुप यो सिजनमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहर...
ब्लड प्रेसर लो भएमा अपनाउनुहोस् यी ६ उपाय
एजेन्सी - उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ। रक्तचाप न्यून भएका बिरामीहरुलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ। तपाई वा तपाईको कोही आफन्तजन न्यून छ भने तपाईले निम्न उल्लेखित तरिका अप्नाउन सक्नुहुन्छ। मदिरा त्याग्ने र बढी पानी पिउनेः मदिरा पिउदा रक्तचाप बढ्छ भन्ने धारणा पनि पाइन्छ। हरेक १० ग्राम रक्सि पिउदा तपाईको प्रेस १ एमएमएचजील...
११५ केजी तौलबाट ६५ केजीमा झारेकी सबानाको फिटनेस
‘ओई, कति मोटाउन सकेकी ?, किन मोटाएकी यति धेरै ? यो मोटीले कति खान सक्छे ?’ तीन वर्ष अगाडि सबाना खातुनलाई इष्टमित्र, आफन्त र साथीहरुले सोध्ने प्रश्न यस्तै थिए। सबानालाई मोटी भनेर गिल्ला गर्ने तिनै साथीभाइ, इष्टमित्र आजभोलि कसरी तौल घटाइस् ? भन्दै जिज्ञासा राख्छन्। यो अवधिमा सबानाले आफ्नो तौल ११५ केजीबाट ६५ केजीमा झारेकी छिन्। २० वर्षकै उमेरमा उनको तौल ११५ केजी पुगेको थियो। उनी १२ कक्षाको परीक...
प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो, मानिस क्रमशः बूढो हुँदै जान्छ । तर, केही उपाय अबलम्बन गर्ने हो भने हामी केही हदसम्म जवान देखिन सक्छौं । हाम्रो शरीर र छालामा रहेका कोषिकाहरू पुरानो भएर मर्ने र नयाँ उत्पन्न हुने क्रम जारी रहिरहने गर्छ । नयाँ कोषिका बढी सिर्जना भयो भने छालाको चमक कायम रहन्छ । तसर्थ, छालामा चाउरी नपरोस् भन्नका लागि स्वस्थ र ताजा खाना खाने गर्नुपर्छ, जसले नयाँ कोषिका सिर्जना गर्न मद्दत ग...
दुवै मृगौला फेल भएकी लोक गायिका देवी पल्ली मगरद्वारा सहयोगको अपिल
काठमाडौ । लोक तारा २०७१ का बिजेता देवी पल्ली मगर अस्पतालको सैयामा दुवै मृगौला फेल भइ जिवनका लागि मृत्युसँग लडिरहेकी छिन । दुवै मिर्गौलामा खराबी देखिएर जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी गुल्मी मुसिकोट ३ मा जन्मिेकी देवीको सकेसम्म छिटो मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने भएको र टड्कारो रुपमा आर्थिक समस्या खडा भएकोले उनको आर्थिक अवस्था अति नै कम्जोर भएको कारण सहयोगको लागि आह्वान गरेकीछिन । सानै उमेर...
चितवन मेडिकल कलेजले लियो सरकारले तोकेको भन्दा १५ लाख बढी शुल्क
चितवन । चितवन मेडिकल कलेज(सिएमसी)मा विभिन्न माग राखी विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीबाट लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु १६ दिन देखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पठनपाठन ठप्प भएको छ । भर्ना शुल्क सरकारले तोके अनुसार हुनुपर्ने मूख्य माग विद्यार्थीले राखेका छन् । विद्यार्थीले कलेजमा वुझाएको ज्ञापनपत्र अनुसार डेन्टल साइन्सको हकमा ७ वटा र चिकित्स...
महिलामा हुने प्रमुख क्यान्सर, कसरी बच्ने?
क्यान्सर, सामान्य भाषामा भन्दा शरीरका कुनै भागका कोषिकाहरु अनियन्त्रित र असामान्य रुपमा बढ्दै जानु हो, जसका कारण सामान्य कोषहरुका काममा बाधा पर्न जान्छ। त्यसले कालान्तरमा शरीरभरि यस्ता असामान्य क्यान्सरका कोषहरु छरिई धेरै अंगहरुको कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्न गई मृत्युको मुखसम्म पुर्या उँछ। क्यान्सर आज सम्पूर्ण मानव जीवनका लागि एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती बनेको छ। यस चुनौतीलाई चिर्दै चिकित्सा विज्ञ...
डेंगु ज्वरो एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो। डेंगुको भाइरसबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइले यो रोग सार्दछ। अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा यो रोग देखापरिरहेको छ। यो रोगका कारण यो वर्ष मात्र हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी बिरामी भइसकेको तथ्यांक आइरहेको छ। यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्दछ। वर्षात्को समयमा सुरु भएपछि डेंगु ज्वरोको प्रकोप बढ्न थाल्छ। डेंगु ज्...
सामाजिक सञ्जालले डिप्रेसन र मानिसक समस्या निम्त्याउछः अध्ययन
सामाजिक सञ्जालले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउने एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनका अनुसार सामाजिक सञ्जालले विज्ञले सोचेभन्दा पनि जटिल रुपमा किशोर/किशोरीहरूमा डिप्रेसनलगायतका मानिसक समस्या निम्त्याउने उल्लेख गरेको छ। १३ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म उमेरसमूहका एक हजार बालबालिकाको अन्तवार्ता लिएर गरिएको सो अध्ययन 'द ल्यानसेट चाइल्ड एन्ड एडोलोसेन्ट हेल्थ'मा प्रकाशित छ। अध्ययनकर्ताह...